September 2018 – Yezin Agricultural University | Official Website
Special Lectures, Conferences and Seminars
Department of Examination and Convocation
Land Resource Evaluation and Resilient Landscapes
Climate Smart Agriculture Centre
Planning & Management Task Force:
ICIMOD Shifting Agriculture in the Chin Hills
Accessing the Sustainability of Lopil-based Shifting Agriculture in the Chin Hills, Myanmar Download
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်သင်တန်းများ ပိတ်ရက်/ဖွင့်ရက် ကြေညာခြင်း ၁။ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် (ဒုတိယနှစ်ဝက်) ဘွဲ့ကြို/ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းအားလုံး၏ ကျောင်းပိတ်ကာလကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၁)ရက်နေ့မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၈)ရက်နေ့အထိ သတ်မှတ်လိုက်သည်။ ၂။ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် (ပထမနှစ်ဝက်) ဘွဲ့ကြို/ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအားလုံး၏ ကျောင်းဖွင့်ကာလကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၉)ရက်၊ တနင်္လာနေ့တွင် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။ ၃။ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်၊ စတုတ္ထနှစ်နှင့် ဘွဲ့လွန်သင်တန်း တက်ရောက်ကြမည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ ကျောင်းလခနှင့် စာမေးပွဲကြေးများကို (၁၉-၁၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ (၂၃-၁၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့ထိ ရုံးဖွင့်ရက်များတွင် ပေးသွင်းရန်သတ်မှတ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ(၂၆)ရက်နေ့ မှစ၍ သင်တန်းများစတင်သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။ မှတ်ချက်။ ။နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက်...
Invitation to Dr. Thu Zar and Dr. Phyo La Pyae Wonn’s Seminars
Seminar Invitation Dear All of Professors, Heads of Departments, Teachers and Post graduate students from Yezin Agricultural University, you are cordially invited to attend the seminars of Dr. Thu Zar (Lecturer, Department of Agronomy) and Dr. Phyo La Pyae Wonn (Assistant Lecturer, Department of Agronomy) with the topic, “Experience on agricultural Ph.D Degree training in Philippine”. When – 17-9-2018...
Invitation to Mg Soe Thiha and Ma Yadanar Moe Myint’s Seminars
Seminar Invitation Yezin Agricultural University has been holding seminars regarding with Research activities from all Departments, Master thesis researches, experiences from domestic and international training courses, and knowledge-sharing lectures from specialists and experts of different organizations. For this 523th seminar, we cordially invite all of Professors, Heads of Departments, Teachers and Post graduate students from...
Invitation to Ma Ei Phyu Win and Ma Khin Zar Zar Htun’s Seminars
Seminar Invitation Yezin Agricultural University has been holding seminars regarding with Research activities from all Departments, Master thesis researches, experiences from domestic and international training courses, and knowledge-sharing lectures from specialists and experts of different organizations. For this 522th seminar, we cordially invite all of Professors, Heads of Departments, Teachers and Post graduate students from Yezin...
Call for Post Graduate Students (Ph.D and M.Sc)
ပါရဂူနှင့်မဟာသိပ္ပံသင်တန်းသားများခေါ်ယူခြင်း (Font = Myanmar 3) ၁။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် အဆင့်မြင့်စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနနှင့် ပညာရေးဗဟိုဌာန (ACARE)စီမံကိန်းဖြင့် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်နှင့် အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေးသုတေသန တက္ကသိုလ် တို့ ပူးတွဲဖွင့်လှစ် သင်ကြားမည့် ပါရဂူနှင့် မဟာသိပ္ပံသင်တန်းများတက်ရောက်ရန် လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူအပ်ပါသည်။ ၂။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် ပါရဂူနှင့် မဟာသိပ္ပံသင်တန်းများတွင် အောက်ဖော်ပြပါအထူးပြု ဘာသာရပ်များ သင်ကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စဉ် သင်ကြားမည့်ဘာသာရပ်များ ၁။ Agricultural Extension ၂။ Food Engineering and Technology ၃။ Molecular Biology and Biotechnology ၃။ သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများသည် အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်စုံကြောင်း အထောက်အထားမူရင်းနှင့်မိတ္တူများကို တင်ပြရမည်- (က) ...
Call for Post Graduate Students (Ph.D)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် (Fonts = Myanmar 3) ပါရဂူ(Ph.D)သင်တန်းဝင်ခွင့်ကြေညာချက် ၁။ လုပ်ငန်းဌာနအသီးသီးမှ စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ရ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချမည့် ပါရဂူ(Ph.D)သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရန်အတွက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ၂။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် ပါရဂူသင်တန်းအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အထူးပြုဘာသာရပ်များ သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၁။ Agronomy ၂။ Plant Breeding, Physiology& Ecology ၃။ Soil & Water Science ၄။ Plant Pathology ၅။ Entomology ၆။ Horticulture ၇။ Agricultural Economics ၃။ ပါရဂူသင်တန်းဝင်ခွင့်အတွက် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ (က) ...
Call for Post Graduate Students (M.Agr.Sc.)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် (Fonts = Myanmar 3) စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံ (M.Agr.Sc.) သင်တန်းဝင်ခွင့်ကြေညာချက် ၁။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ်ဝက်တွင် ​ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပို့ချမည့် စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံ (M.Agr.Sc.) သင်တန်းသို့ လုပ်ငန်း/ဌာန အသီးသီးမှ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ (B.Agr.Sc.)နှင့် စိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ (PostgradDipAgSc) ရရှိပြီးသည့် ဝန်ထမ်းများသည် ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ၂။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်ဝက်၌ စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံသင်တန်းကို အောက်ပါ အထူးပြု ဘာသာရပ်များ သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၁။ Agronomy ၂။ Plant Breeding, Physiology& Ecology ၃။ Soil & Water Science ၄။ Plant...
Call for Post Graduate Students (M.Phil)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် (Fonts = Myanmar 3) စိုက်ပျိုးရေးမဟာဒဿန (M.Phil)သင်တန်းဝင်ခွင့်ကြေညာချက် ၁။ ​ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၌ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချမည့် စိုက်ပျိုရေးမဟာဒဿန (M.Phil)သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံကျောင်းများမှ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ (B.Agr.Sc.) ရရှိပြီးသည့် ဆရာ/ဆရာမ များသည် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီပါက ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ၂။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် စိုက်ပျိုးရေးမဟာဒဿနသင်တန်းတွင် အောက်ပါအထူးပြု ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၁။ Agricultural Extension ၃။ စိုက်ပျိုးရေးမဟာဒဿန (M.Phil)သင်တန်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။ (က) လျှောက်ထားသူသည် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။ (ခ) (၂၁-၉-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် လုပ်သက်အနည်းဆုံး(၂)နှစ်ပြည့်ပြီး အသက်(၄၅)နှစ်ထက် မကျော် လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။...
Copyright All Right Reserved, Yezin Agricultural University.